Nezvedu - Zhangjiagang Hongshida Textile Trading Co., Ltd.
Zhangjiagang Hongshida Textile Trading Co., Ltd. inonyanya kushanda mukutsvagisa kwetekinoroji nekusimudzira, kugadzirwa pamwe nekutengesa uye kutumira kunze kwenyika zvinhu zvitsva, nezvigadzirwa zvakadai semabhodhi anotora ruzha, mabhodhi anomiririra murazvo, nylon, polyester uye mamwe machira mbishi. zvishandiso. Inowanikwa pa21 Xinzha Middle Rd., Guta reYangshe, Zhangjiagang, Suzhou, chirimwa chedu chinofukidza zvinopfuura 20,000 m2. Kubva pakagadzwa, yakatsaurirwa kutsvagisa nekusimudzira kweye fiber zvinhu kweanoda kusvika makore makumi maviri. Kambani yedu inemabhizimusi maviri. Imwe ndeye Zhangjiagang Xinlun Textile Co, Ltd., iyo inonyanya kuongorora nekuvandudza kwenylon, polyester uye polypropylene fibers. Imwe ndeye Suzhou Lishengyuan nyowani zvigadzirwa Technology Co, Ltd., iyo inopa vatengi nehunyanzvi acoustic mhinduro uye inoita mukusimudzira uye kugadzirwa kwepolyester fiber fiber-inotora zvinhu. Yakazvitsaurira mukutsungirira kwedu kwekuramba kwemhando yepamusoro, weimported epasirese epamberi otomatiki zvigadzirwa zvekugadzira muna 2002, nechinangwa chekugadzira zvigadzirwa izvo vatengi vedu vanogutsikana nazvo.
Xinlun Textile yakatanga kuburitsa nylon yakakosha fiber muna 2002. Kwete chete kuti ine ruzivo rwakawanda mukugadzirwa, zvakare ine yakagadzirirwa kuyedza kugona uye inotungamira pfungwa dzeR & D. Parizvino, ine nomwe kiyi nylon staple fiber chigadzirwa kuunganidzwa uye doezens ye-sub-collecitons, kusanganisira, zvakajairwa tambo, tambo dzakasimba, dzakapetwa tambo, yekupenda tambo kubva kune yakasvibira mhinduro, murazvo unodzora tambo uye inoshanda fibers. Izvi zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mukusanganisa kutenderera nekotoni, rayonand polyester. Kunze kwezvo, iwo anoshandiswawo mumachira asina kurukwa, zvigadzirwa zvehasha, magumbeze ekugadzira mapepa uye mimwe minda. Iwo akakosha kutaurwa anotangira pa0.8d kusvika 30d, ane hurefu hwe38mm kusvika 130mm. Iyo kambani yakazvipira kuzadzisa zvido zvemunhu wese zvevatengi vedu uye nekugadzira akawedzera iwo maitiro kwavari. Pamusoro pekupindura nekukurumidza uye kusanduka kugadzirwa, kambani inozvipira kutsvagisa, kusimudzira uye kugadzira kweanoshanda nylon staple fiber. Zvichakadaro, zvakare inoshingairira inowedzera mumisika yepamusoro-yekumba nekunze.Nekusimbirira kuzvimiririra hunyanzvi, isu tatotanga rwendo rwunoenderera mberi rwekuvandudza kwedu kwepamoyo kukwikwidza.
Zvigadzirwa zveDeco Ruzha zvinotora ruzha uye kushongedza uye eco-inoshamwaridzika. Zvichakadaro, ivo zvakare vakapakata maficha senge kuve murazvo unodzora, kupisa kupisa uye kusimba. Zvinoreva kuti zvigadzirwa izvi zvinogona kusangana nezvinodiwa zvezvikamu zvakasiyana zveacoustic kurapwa uye akasiyana ekushongedza masitaera. Naizvozvo, anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakaita sema cinema, makamuri emusangano, ma studio, mahotera, dzimba dzemakonzati, nzvimbo dzekutengesera, zvikoro, dzimba dzekurovedza muviri, matumba e karaoke, nezvimwewo Nezvakanaka izvi, lishengyuan desosound yakashambadza zvigadzirwa zvekutora zvigadzirwa zvinozivikanwa zvese kumba uye kunze kwenyika.
Ourcompany muridzi mu-imba hwokugadzira patents, uye rakaisvonaka utariri chikwata. Isu tinoremekedza zvakasiyana mhando dzehurongwa uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza masisitimu..Hatimbomira mukutsvaka kwedu kwekuve nyanzvi uye rakagadziriswa bhizinesi. Mukuita kwekuenderera kukura, isu tinogara tichigadzirisa kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kuchengetedza simba uye kudzikisira kusvibiswa sezvakakosha zvedu. Chinangwa chedu ndechekuva mucherechedzo wakasimba we eco-hushamwari tambo uye zvirinani kushandira musika wepasi rose.